सय बढी शव प्लास्टिकका पोकामा
काठमाडौं – त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जअन्तर्गतको फरेन्सिक मेडिसिन विभागका प्रमुख प्राडा. प्रमोदकुमार श्रेष्ठ निकै चिन्तित देखिन्छन् । उनको चिन्ता ज्युँदो मानिसप्रति भन्दा मृतकको शवप्रति केन्द्रित छ ।
‘मेडिकल कलेजहरूलाई पनि सग्ला शव चाहिन्छ, हातगोडा, टाउको नभएर अंगभंग भएका या छिन्नभिन्न भएका शव लाँदैनन्, पोस्टमार्टमपछि यहाँ पोकामै थन्किन्छन्,’ प्राडा. श्रेष्ठले भने । ठाउँको अभावमा ल्याबमा शव राख्न मात्रै होइन, थप फरेन्सिक परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने शवको नमुना (हाडमासु र आन्द्राका टुक्रा) संकलन गर्न पनि ल्याबमा कठिन भइरहेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।